Waxaan ka ognahay tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan taleefanka soo laabashada xiga ee Samsung | Androidsis
Sidan ayaa loo qeexayaa mobilada laaban ee Samsung
Samsung ayaa ugu sareysa wax walba waxaanan soo bandhignay qaar ka mid ah waxyaabaha ku cusub qalabka shirkadda Kuuriya maalmo yar. Hadda waxaan ognahay faahfaahinta qaar ka mid ah sida uu noqon doono mobilada isku laaban Samsung.
Shirkadda Kuuriya waa inay yeelataa beddel isdhexgalkaaga khibradaada Samsung loogu talagalay mobilada leh laba shaashadood oo loo rogi karo kiniin ama moobil sida ay noogu habboon tahay.
Ilaa iyo inta aan maanta sheegi karno, Samsung ayaa noqon laheyd la shaqeeya laba nooc oo kala duwan oo loogu talagalay moobilkiisa duuban. Mid waxaa lagu gartaa inuu yahay qaab taagan markii gebi ahaanba la laalaabayo, halka nooc kale uu noqonayo mid jiifa. Laba sharadood oo kaladuwan oo loogu talagalay hab kale oo lagu fahmo khibrada uu taleefanka casriga ahi bixin karo.
Haddii aan ka hadleynay magaca Kuuriya oo isku dhafan Dareemida sawirka shaashada hoosteeda ee Galaxy S10 ee soo socda, sida teknoolojiyaddan kale o xusuusta cusub, ee adiga loogu talagalay heer sare ah 2019 iyo 2020, Kama wada hadli karno isla halkaan, maxaa yeelay moobilkani wuxuu sameyn lahaa la'aan qalabka dareeraha ee shaashadda.
Mobile Samsung ah oo laab laaban wuxuu u furmi lahaa sida mobiilladii hore ee qoloftaIn kasta oo makaanikyadu la jaan qaadi karaan maanta si ay u noqdaan "casri" iyo "qabow". Sifooyinka kale ee aan ognahay waa culeyskiisa, oo leh 200 garaam, marka waxay ag dhigaysaa taleefannada casriga ah ee leh shaashadaha waaweyn; qor nooca Galaxy Note 9 ama iPhone XR cusub oo la bilaabay.
Waxaan kaloo ognahay ctirada ugu badan ee ku celcelinta Taasi waxaa loo samayn karaa habka furitaanka, kaliya qiyaastii 200.000 iyada oo aan waxyeello u geysan moobiilka. Xilligan la joogo ma ogin inay noqon doonto dhammaadka sannadkan ama bilowga sannadka dambe marka Samsung ugu dambayntii ay go’aansato inay soo bandhigto moobilkan duubmaya oo ay dad badani doonayaan inay runti ogaadaan sida uu noqon doono.
Waan arki doonnaa sida Samsung ay ugu keento moobilkeeda isku laaban taasna runtii waxay sacab badan ka qaadan doontaa dadweynaha lugta; Gaar ahaan sumadda Kuuriya markii ay haleesho, yaqaan sida wax loo qabto si aad u wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sidan ayaa loo qeexayaa mobilada laaban ee Samsung
Sida loo nadiifiyo taariikhda baalashada ee Google Chrome ee loogu talagalay Android
Soo dejiso waraaqaha ranjiga cusub ee Razer Phone 2